Soo-saareyaasha Aqoon-isweydaarsiga Qaab-dhismeedka Shiinaha iyo alaab-qeybiyeyaasha. Decheng
Qaab dhismeedka Qaabdhismeedka Qaab dhismeedka casriga ee Prefabric Warehouse / Workshop / Diyaaradaha Hangar / Qalabka Dhismaha Xafiiska
Dhismaha qaabdhismeedka birta ee ay sameysay silsiladda birta, birta birta, jiingada, Purlin, dhamaan qaababka birta ah ee lagu farsameeyay aqoon isweydaarsiga iyo gaarsiinta goobta mashruuca, dhaqso u rakibida, dhismaha cagaaran iyo badbaadinta shaqaalaha.
Qaab dhismeedka Qaabdhismeedka Dhismeedka Birta ah ee Casriga ah Warehouse Prefabricated / Aqoon isweydaarsi
/ Hangar Diyaaradeed / Qalabka Dhismaha Xafiiska
1. Isbarbardhiga aqoon isweydaarsiga qaabdhismeedka Birta & Dhismaha Dhaqanka
①. Dhismaha Dhaqanka:
A. Waqti qaadasho: Muddo dheer oo dhisme ah
B. Shaqaale badan: Nidaamku waa mid adag oo hawl badan
C. Ilaalinta aan deegaanka ahayn: oo aan dib loo cusboonaysiin karin iyo kharash badan
②. Aqoon-isweydaarsiga Qaab-dhismeedka Birta:
A. Waqtiga badbaadinta: Dalbo khadka tooska ah kuna dhammee 30 maalmood
B. Fududeynta walwalka: dhismaha goobta, nooca isku imaatinka
C. Ilaalinta deegaanka: dib-u-warshadayntu waxay hoos u dhigaysaa qiimaha 50%
2. Astaamaha Aqoon isweydaarsiga Qaab-dhismeedka Birta
Miisaanka fudud ee dhintay: birtu waxay leedahay awood sare iyo dabacsanaan. Marka la barbardhigo dhismayaasha shubka ah ee la xoojiyay, waxay leedahay awood sare, culeys fudud oo dhinta, qalafsanaan wanaagsan oo dhammaan meerayaasha adag iyo awood sameynta xoog leh. Is-miisaanka aqoon isweydaarsiga qaab dhismeedka birta ayaa ah kaliya shan meelood meel dhismaha bir-shubka, iska caabi 70 mitir ilbiriqsi kasta oo duufaan ah, si nolosha iyo maalka si hufan loogu ilaaliyo.
Waxqabadka dhul gariirka: Aqoon isweydaarsiyada qaabdhismeedka biraha waxay leeyihiin waxqabad badbaado oo wanaagsan oo dhulgariir. Inta badan saqafyada qaab-dhismeedka biraha waa saqafyo jajaban. Sidaa darteed, qaabdhismeedka saqafku wuxuu asal ahaan qaataa nidaamka gogosha saqafka saddex geesoodka ah ee laga sameeyay xubno bir ah oo qabow sameeyay. Ka dib marka la shaabadeeyo birta qaabdhismeedka iyo midabka saxanka birta ah, waxay ka kooban tahay qaab aad u xoog badan "nidaamka qaabdhismeedka feeraha saxan", oo leh adkeysi dhul gariir xoog leh Waxaa loo isticmaali karaa aagagga leh xoogga dhulgariirka oo ka sarreeya 8 darajo
Cimri dherer: Aqoon isweydaarsiga qaabdhismeedka birta qaab-dhismeedkiisu wuxuu dhammaantood qaataa habka qaab-dhismeedka birta dhuuban ee qaab-dhismeedka birta ah, birta birta ah waxay aqbashaa awoodda sare ee ka hortagga-daxalka iyo soosaarida xaashida dhoobada kulul, taas oo si wax ku ool ah uga hortagi karta daxalka saxanka birta ee geeddi-socodka ee dhismaha iyo adeegsiga, iyo kordhinta nolosha adeegga qaybaha biraha fudud. Nolosha adeegga ee qaabdhismeedka ugu weyn wuxuu gaari karaa in ka badan 50 sano.
Taako ballaaran: Qaab dhismeedka birta ah ayaa loo qaabeyn karaa si waafaqsan, ku habboon qaabdhismeedka ballaaran, mana lahan tiirar isticmaal haddii aad rabto, inaad meel dhigato meel wax ku ool ah.
Dhaqaalaha: sameynta aqoon isweydaarsiga qaabdhismeedka birtu waa mid aad u fudud, miisaankiisuna yahay mid aad u fudud, markaa qiimaha guud waa uun saddex meelood meel dhismaha guud ee la taaban karo, macaashka hawlgalkuna waa saddex meelood meel dhismaha guud. Isbarbardhig: qaab dhismeedka la taaban karo: 800-1500 RMB / mitir laba jibbaaran; aqoon isweydaarsiga qaabdhismeedka birta: 260-500 RMB / mitir laba jibbaaran, waxay si weyn u xakameyneysaa qiimaha.
Dabacsanaanta: dabacsanaan iyo kala duwanaansho. Naqshadaynta weyn ee loo yaqaan 'bay bay', bannaanka gudaha ayaa loo qaybin karaa nidaamyo badan, oo buuxin kara baahiyaha kala duwan ee dadka isticmaala isla markaana keenaya naqshad ballaadhan.
Kuleylka kuleylka: Sanduuqa loo yaqaan 'sandwich panel' waa kuleylka ugu weyn ee kuleylka iyo qalabka kuleylka ee ay aqbasho qaab dhismeedka birta, iyo waxyaabaha derbiga laga soo saaro inta badan waxaa ka mid ah guddi sanduuq bir ah oo midab leh iyo sabuuradda dhagaxa weyn ee dhogorta leh, taas oo leh dahaadh heer sare ah iyo saameynta qiiqa. Gudiga dahaadhka ee darbiga xijaabku wuxuu gaadhaa saamayn kufilan. Caabbinta kuleylka ah ee R15 cudbi-xajmiga cusub leh dhumucdiisuna tahay 100 mm waxay la mid noqon kartaa tan gidaarka lebenka M24 oo dhumucdiisu tahay 1 m.
Kuleylka kuleylka: saameynta kuleylka kuleylka ayaa ah bartilmaameedka ugu weyn ee qiimeynta guryaha. Daaqadaha lagu rakibay nidaamka birta nalka ayaa qaata muraayad maran, oo saamaynta kuleylka kuleylka ayaa wanaagsan, oo leh kuleylka kuleylka illaa 40 db; darbiga ka kooban qaab-dhismeedka birta fudud iyo birta midabka leh ayaa ku guuleysan kara saameynta kuleylka kuleylka illaa iyo 60 dB. Waa seddex meelood laba meel shubka oo laba jibbaar ka badan qaab dhismeedka alwaax.
Raaxo: gidaarka birta nalka ah wuxuu qaataa nidaamka keydinta tamarta waxtarka sare leh, oo aan u baahnayn inuu ka walwalo formaldehyde oo ka sarreysa heerka. Isla mar ahaantaana, waxay leedahay waxqabadka hawo wanaagsan. Waxay ka dhigi kartaa hawada guriga ka koreysa inay sameyso jawi deggan oo waxay hubisaa hawo iyo baahiyaha kala-baxa kuleylka saqafka bannaanka.
Wax ku oolnimada: dhammaan dhismayaasha qalalan, ee uusan saameyn xilliga deegaanka, oo aysan saameyn biyaha iyo korontada. 1000 mitir laba jibbaaran gudaha iyo dibedda dhismaha, illaa iyo inta 5 shaqaale ah, 30 maalmood oo shaqo ah ayaa lagu gaari karaa dhammaan howlaha laga soo bilaabo dhulka ilaa qurxinta.
Ilaalinta deegaanka: walxaha waa la isticmaali karaa 100%, runti waa cagaar aan daahirin.
Kaydinta tamarta: dhammaantood waxay qaataan qaab-ku-ool ah oo tamar-badbaadin ah, lakabka iyo derbiga, oo leh kuleyliyaha kuleylka wanaagsan, kuleylka dhawaqa iyo saameynta kuleylka kuleylka, kaas oo gaari kara heerka tamarta keydinta tamarta 50%.
3. Soosaarida Qalabka Qaab-dhismeedka Birta
4. Qalabka Soosaarka ee Guddi
6. Ku rakibidda Goobta
Waraaqaha Madaxa ee Plasterboard